ပြန်လှည့်မကြည့်ရတဲ့အချစ်မျိုးကိုရွေးချယ်ပါ…🤞🤞 – Trend.com.mm
အချစ်ရေးဆိုတာကြီးကသိပ်ကိုရှုပ်ထွေးတဲ့အရာကြီးဗျ…တစ်ချို့လူတွေအတွက်ပူလောင်တယ် တစ်ချို့တွေအတွက်ကြတော့နာကျင်ရတယ်၊ တစ်ချို့တွေအတွက်ကြတော့သင်ခန်းစာတွေရပြီး၊ တစ်ချို့အတွက်ကအလင်းရောင်တွေ ခွန်အားတွေဖြစ်စေတယ်။ ဒီလိုပဲ အမျိုးမျိုးအဓိပ္ပါယ်ရှိနေတဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကြီးကို အလုပ်ရှုပ်ပါတယ်ဆိုပြီးဖယ်ထားလို့ပြန်ကလည်းမရ စိတ်ထဲကနေသူ့ဘာသာသူအလိုလိုတွေဖြစ်လာတာကို…ဆိုတော့ကိုယ့်ဆီရောက်လာတဲ့ အမျိုးမျိုးသော အဓိပ္ပါယ်ရှိတဲ့အချစ်တွေကို သေချာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီးရင်တော့ နောက်ပြန်လှည့်ကြည့်စရာမလိုတဲ့ အချစ်ရေးမျိုးကိုသာရွေးချယ်လိုက်ပါ။ ဘယ်လိုအချစ်မျိုးကနောက်ပြန်လှည့်ကြည့်စရာမလိုတဲ့အရာမျိုးလဲ??? မေးခွန်းတွေ ရှိလာကြမှာပါ..သူနဲ့ရှိနေရင်ကို ကိုယ့်ဘ၀ကလုံခြုံနွေးထွေးနေတာမျိုး၊အချိန်တိုင်းရင်ခုန်နေတာမျိုးမဖြစ်ရင်တောင် ခဏလောက်ပွေ့ဖက်လိုက်တာနဲ့ တစ်နေ့တာပင်ပန်းထားသမျှဟာ ယူပစ်သလိုအေးချမ်းသွားတာမျိုး၊ ကိုယ့်ရဲ့ဒုက္ခတွေစိတ်ပင်ပန်းစရာတွေအားနည်းချက်တွေကိုချပြဖို့လည်းဝန်မလေးတာမျိုး၊ သူ့ရှေ့မှာရဲရဲဝံ့ဝံ့အမှားလုပ်ပြီးတောင်းပန်ဖို့ဝန်မလေးတာမျိုး၊ သင်နဲ့သူရဲ့အနာဂတ်ဟာအခက်ခဲတွေရှိနေရင်တောင်သူနဲ့သာဆိုရင်သင်ကျော်လွှားနိုင်မယ်လို့ကောင်းကောင်းကြီးယုံကြည်နေမိတာမျိုး၊ ကိုယ့်ကြောင့်ကိုယ့်ထက်လှတဲ့မိန်းမတွေကို ရှောင်ကွင်းခဲ့တာမျိုး…အိုကေပါ…ဒါဆိုင်တော့ဖြင့် သင့်ရဲ့အချစ်ရေးက နောက်လှည့်ကြည့်စရာမလိုလောက်အောင်ပဲ အဆင်ပြေသလောက်ရှိနေပါပြီ။ လူ့ဘ၀ကြီးထဲနေရတဲ့အချိန်ခဏလေးအတွင်းမှာစားဖို့သောက်ဖို့ ရုန်းကန်ကြိုးစားရတာတစ်မျိုးတာဝန်တွေယူရတာကတစ်ဖုံနဲ့ အနည်းနဲ့များပင်ပန်းနေရတဲ့အချိန်မှာ အချစ်ရေးကြောင့်သင့်စိတ်ကိုအကြာကြီးမညင်းစဲပါနဲ့။ သိပ်ပြီးသဲသဲလှုပ်မချစ်ရင်တောင် သင့်အတွက်အေးချမ်းစေမဲ့နောက်လှည့်မကြည့်ရတဲ့အချစ်ရေးမျိုးကို သာရွေးချယ်တန်ဖိုးထားတတ်ပါစေ…
အခဈြရေးဆိုတာကွီးကသိပျကိုရှုပျထှေးတဲ့အရာကွီးဗြ…တဈခြို့လူတှအေတှကျပူလောငျတယျ တဈခြို့တှအေတှကျကွတော့နာကငျြရတယျ၊ တဈခြို့တှအေတှကျကွတော့သငျခနျးစာတှရေပွီး၊ တဈခြို့အတှကျကအလငျးရောငျတှေ ခှနျအားတှဖွေဈစတေယျ။ ဒီလိုပဲ အမြိုးမြိုးအဓိပ်ပါယျရှိနတေဲ့ခဈြခွငျးမတ်ေတာကွီးကို အလုပျရှုပျပါတယျဆိုပွီးဖယျထားလို့ပွနျကလညျးမရ စိတျထဲကနသေူ့ဘာသာသူအလိုလိုတှဖွေဈလာတာကို…ဆိုတော့ကိုယျ့ဆီရောကျလာတဲ့ အမြိုးမြိုးသော အဓိပ်ပါယျရှိတဲ့အခဈြတှကေို သခြောခှဲခွမျးစိတျဖွာပွီးရငျတော့ နောကျပွနျလှညျ့ကွညျ့စရာမလိုတဲ့ အခဈြရေးမြိုးကိုသာရှေးခယျြလိုကျပါ။ ဘယျလိုအခဈြမြိုးကနောကျပွနျလှညျ့ကွညျ့စရာမလိုတဲ့အရာမြိုးလဲ??? မေးခှနျးတှေ ရှိလာကွမှာပါ..သူနဲ့ရှိနရေငျကို ကိုယျ့ဘဝကလုံခွုံနှေးထှေးနတောမြိုး၊အခြိနျတိုငျးရငျခုနျနတောမြိုးမဖွဈရငျတောငျ ခဏလောကျပှဖေ့ကျလိုကျတာနဲ့ တဈနတေ့ာပငျပနျးထားသမြှဟာ ယူပဈသလိုအေးခမျြးသှားတာမြိုး၊ ကိုယျ့ရဲ့ဒုက်ခတှစေိတျပငျပနျးစရာတှအေားနညျးခကျြတှကေိုခပြွဖို့လညျးဝနျမလေးတာမြိုး၊ သူ့ရှမှေ့ာရဲရဲဝံ့ဝံ့အမှားလုပျပွီးတောငျးပနျဖို့ဝနျမလေးတာမြိုး၊ သငျနဲ့သူရဲ့အနာဂတျဟာအခကျခဲတှရှေိနရေငျတောငျသူနဲ့သာဆိုရငျသငျကြျောလှားနိုငျမယျလို့ကောငျးကောငျးကွီးယုံကွညျနမေိတာမြိုး၊ ကိုယျ့ကွောငျ့ကိုယျ့ထကျလှတဲ့မိနျးမတှကေို ရှောငျကှငျးခဲ့တာမြိုး…အိုကပေါ…ဒါဆိုငျတော့ဖွငျ့ သငျ့ရဲ့အခဈြရေးက နောကျလှညျ့ကွညျ့စရာမလိုလောကျအောငျပဲ အဆငျပွသေလောကျရှိနပေါပွီ။ လူ့ဘဝကွီးထဲနရေတဲ့အခြိနျခဏလေးအတှငျးမှာစားဖို့သောကျဖို့ ရုနျးကနျကွိုးစားရတာတဈမြိုးတာဝနျတှယေူရတာကတဈဖုံနဲ့ အနညျးနဲ့မြားပငျပနျးနရေတဲ့အခြိနျမှာ အခဈြရေးကွောငျ့သငျ့စိတျကိုအကွာကွီးမညငျးစဲပါနဲ့။ သိပျပွီးသဲသဲလှုပျမခဈြရငျတောငျ သငျ့အတှကျအေးခမျြးစမေဲ့နောကျလှညျ့မကွညျ့ရတဲ့အခဈြရေးမြိုးကို သာရှေးခယျြတနျဖိုးထားတတျပါစေ…